विराटनगरकी महिलाको कोरोनाका कारण मृत्यु
विराटनगर, ३२ साउन । विराटनगर तीनपैनीकी एक महिलाको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण आइतबार बिहान मृत्यु भएको छ ।
५० वर्षीय महिलाको उपचारका क्रममा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा मृत्यु भएको हो । कोरोना संक्रमण पुष्टि भएकी महिलाको स्वास्थ्य अवस्था थप गम्भीर बन्दै गएपछि उनलाई शनिबारराति थप उपचारका लागि धरान लगिएको थियो । उनको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रतिष्ठानका प्रवक्ता डा. निदेश सापकोटाले बताए ।
पछिल्लो ४–५ दिनदेखि अत्यधिक ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने तथा श्वास फेर्न समस्या रहेको थियो । महिलालाई फोक्सो, मुटुु र थाइरोइडको पनि समस्या रहेको डा. सापकोटाले बताए । त्यस्तै उनको दिल्लीबाट मुटुको उपचार हुँदै आएको बताइएको छ ।